Nyi Nyi Latt: Window 8 .....???
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Window7 သုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တစ်မူထူးခြားတဲ့ အသွင်လေးဖြစ်တဲ့ Window8 Theme လေးကို စေတနာ ဗလပွနဲ့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်.:D။ Window7ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေမယ့် အမြင်ကတော့ တော်တော်လေးကို သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားမှာပါ။ သူများနဲ့မတူ တစ်မူထူးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက်တော့ ဒီ Theme လေးကတော့ အဆင်ပြေစေမှာပါ။ သုံးရတာလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Folder လေးကို Download ချပြီး C:\_Windows\_Resources\_Themes ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်ရင် သူငယ်ချင်းတို့ လိုချင်တဲ့ Theme လေးကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။